Hlola i-Ajman, United Arab Emirates - World Tourism Portal
Hlola i-Ajman, United Arab Emirates
Kufanele ubone e-Ajman, UAE. Okuhehayo okuphezulu e-Ajman, UAE
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Ajman, UAE
Bukela ividiyo mayelana ne-Ajman, UAE
Hlola u-Ajman munye we I-United Arab Emirates kanye nemincane kunayo yonke yezindondo eziyisikhombisa ezitholakala maphakathi nolwandle olusentshonalanga ye-United Arab Emirates. I-Ajman ilele ogwini lwe-Gulf lapho ugu lwayo lufinyelela khona nge-16 Km. kanti indawo ephelele ye-Ajman iyi-259 skwele Km. isilinganiso sabantu bakhona cishe i-230 ayinkulungwane njengonyaka we-2004. Indawo ye-Emirate ye-Ajman imayelana ne-460 Sq. Km. ngenkathi indawo ephelele kubandakanya amanzi wesifunda imayelana ne-600 Sq. Km. I-Ajman City inhloko-dolobha ye-Emirate futhi ilala echibini elincane le-16 Km. ubude buya eNyakatho East ye USharjah.
Umndeni obusayo we-Ajman uyisizwe se-AL Nuaimi.
Isisekelo se-Ajman ngaphansi kokubusa kweNuaimi senzeka e-1816, ngenkathi uSheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi nabalandeli bakhe abangamashumi amahlanu bathatha indawo yokuhlala ngasogwini kwe-Ajman kumalungu esizwe sakwa-Al Bu Shamis empini emfushane. Kwakungenxa kuze kube yi-1816 noma i-1817, nokho, ukuthi inqaba ye-Ajman ekugcineni yawa abalandeli bakaRashid futhi umbuso wakhe waqinisekiswa yi-Sheikh enamandla yomakhelwane uSharjah noRas Al Khaimah, uSheikh Sultan bin Saqr Al Qasimi.
Ku-2 ngo-December 1971, u-Ajman, ngaphansi kuka-Sheikh Rashid bin Humayd Al Nuaimi, ujoyine i-United Arab Emirates.
Idolobha linama-90% angaphezu kwenani labantu abathunyelwe. Le ndawo igijimela ngqo edolobheni laseSharjah ogudla ugu oluseningizimu-ntshonalanga, okuthi kuyo kube lapho Dubai, yakha indawo eqhubekayo yedolobha.
I-Ajman iyikhaya nehhovisi likaMlawuli, izinkampani, izimakethe zezentengiso, kanye nezitolo zezitolo zomhlaba wonke ze-50. Izinhloso zebhange zifaka: I-Emirates National Bank yase-Dubai, i-Ajman Bank, i-Arab Bank PLC, i-Bank Saderat Iran, kanye neBhange Lezentengiselwano laseDubai. I-Ajman ibuye ibe yimboni yezokudoba & Ama-sea sea Exter / Exporters ngaphakathi UAE. Izitolo ezinkulu zifaka i-Ajman China Mall neCity Center Ajman.
Ngomthamo wokwamukela izinkampani ze-1500 futhi zisebenzela izikebhe ezingaphezu kwe-1,000 ngonyaka, i-Ajman Port ne-Ajman Free Zone zingaba nomthelela omkhulu emnothweni we-emirate. Kuthunyelwa emazweni angaphezu kwe-65, izinkampani zeFree Zone zakha okuthile okufana ne-20% yamayunithi ezimboni zonke ze-UAE, ezinye izinkampani zezimboni ze-256 ezisebenza endaweni.
U-Ajman uyaqhubeka nokuthuthuka okubangelwe yinkinga yezimali ye-2007-2008 waphinda futhi wenza inkathi yokukhula. Ukuheha izivakashi emirate, kufaka phakathi amahhotela, ukuyothenga nezindawo zamasiko kukhula ngokushesha. Ukuheha izivakashi kufaka i-Ajman National Museum etholakala e-Ajman Fort, iRed Fort kanye nomnyuziyamu ongaphakathi kwezwe Manama.
I-Ajman's corniche iyindawo ethandwa kusihlwa nangempelasonto yemindeni futhi ifaka izitolo eziningi zokudla okusheshayo, izitolo zekhofi kanye nezitolo. Kuyikhaya 'i-Ngaphandle Ngaphandle', umgodi odumile wokunisela nabahambi, kanye namahhotela amaningi, kubandakanya iRamada, i-Ajman Palace, iKempinski, i-Ajman Saray neFairmont Ajman.
Imbobo yemvelo (noma i-khor) yemvelo ye-Ajman itholakala emseleni ongokwemvelo ongena edolobheni. I-Ajman futhi iyikhaya le-Arab Heavy Industries, elinye lamafemu akhiqiza umkhumbi omkhulu emhlabeni.
Isikhumulo sezindiza esikhulu emirate sitholakala ekuhlanganeni kwe Manama, cishe nge-60 km empumalanga yedolobha, ngaleyo ndlela kwenye yezingxenye ezikude kakhulu ze-emirate. Kodwa-ke, iSharjah International Airport iqhele ngamakhilomitha ambalwa.
U-Ajman uyakujabulela ukutholakala maphakathi ne-Emirates iyonke. Imngceleni weSharjah futhi yi-10 Km kuphela engasuki eDubai eningizimu futhi Umm Al Quwain enyakatho. Imigwaqo eminingi iholela futhi ivela e-Ajman evela eSharjah, eDubai, nase- Umm al Quwain, kufaka phakathi i-Emirates Road. I-Ajman iseduze namachweba e-Emirates angomakhelwane. Kuseduze nezikhumulo zezindiza zamazwe omabili Sharjah futhi Dubai.
Amatekisi kulula kakhulu ukuwathola futhi kulula ukuzithola uwasebenzisa. Vele ingasetjenziswa ukufika nakwamanye ama-emirates.
Bheka amatekisi okwabiwe kuwo alinde abantu be-4 ukuthi beze bazothatha itekisi. Lawa ngamatekisi “angekho emthethweni”, ashibhile futhi atholakala endaweni yaseSomalia e-Ajman.
Amabhasi okuvakasha: amabhasi okuvakasha aqondisiwe angatholakala emahhotela aphezulu lapho angahlela khona ukuvakashela i-Ajman nokuhelela okukuyona.
I-Ajman Museum. Inqaba endala esigcawini esimaphakathi. Yakhiwa ngekhulu le-18th ngasekupheleni isebenze njengesigodlo sababusi. Kuma-70 ibisetshenziswa njengesiteshi samaphoyisa. Ungabona ubuciko obahlukahlukene kanye nokwakhiwa kabusha kwempilo yendabuko.
I-Ajman beach ihlala iyindawo enhle yokuchitha usuku lapho ilanga elifudumele, izihlabathi ezimhlophe, namanzi acwebile. Ukubona indawo kaDolphin nakho kungumsebenzi wokuzilibazisa owawuthokozelwa ku-emirate.
Izitolo eziklami kanye nemikhiqizo emikhulu ziyatholakala eCity Center Mall futhi zinendawo yokudla enhlobonhlobo. Ohlangothini lwendabuko, kuhlala kukhona ama-souq ase-Irani lapho ungathenga izimpahla ezifuywayo futhi uma unenhlanhla ubumba oluthile luyajabulisa.
Ukudla i-cafe front cafe kulungile futhi kushibhile.
I-Ajman Fish Market (Market Market). Indawo enhle yokubona umdobi ekhipha ukubanjiswa okusha futhi abuke indali ephakathi nendawo kubathengi bezitolo. Kungenzeka ukuthi uthenge izinhlanzi bese uziphekela khona lapho emakethe yezinhlanzi noma ngaphesheya komgwaqo.
Utshwala buvunyelwe e-Ajman futhi butholakala kalula emahhotela nasezitolo zokudlela.
Amanzi ompompi abhekwa njengelungile kepha anokunambitheka okunosawoti omncane. Isizathu esisobala ukuthi izitshalo ze-desalination zisetshenziselwa ukunikeza amanzi ompompi. Ngaphezulu iphuzu, ungayisebenzisa ngokuphepha ukuxubha amazinyo akho nokulungiselela itiye.
Amanzi asemabhodleleni ayatholakala kunoma yisiphi isitolo ezungeze idolobha.
Kunemitholampilo eminingi ekhethekile e-Ajman. Isikhungo sase-Ibin Sina Medical Center singabizi futhi sinokuningi okubalulekile. Izinsiza zokuxilonga ziyatholakala. Isibhedlela se-GMC amahora we-24 avulekile wezimo eziphuthumayo. ISh Khalifa Hospital iyisibhedlela somphakathi esinomnyango ophuthumayo.
Zizwe ukhululekile ukuhlola i-Ajman…